Sistem Kpo Oku China Manufacturers & Suppliers & Factory
Sistem Kpo Oku - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Sistem Kpo Oku)
Sistem Na-ekpo Ekpu Snowmelt
Nkọwapụta ngwaahịa Ezubere iji gbochie elu n'elu ụlọ nke nwere ike imebi, Igwe ọkụ ọkụ na-agbaze ọkụ bụ ngwọta dị mfe nke na-egbochi ụlọ oyi kpọnwụrụ, nke gbawara agbawa ma mebie emebi. Ozugbo arụnyere, snow na-agbaze kpo oku na-akpacha aka na-eme ka okpomọkụ dị n'elu ụlọ mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-adaba...
Ngwá Ọrụ Ngwá Nkụzi Akpadoro maka Ịkụ ọkpọ
Nkọwapụta ngwaahịa Na-eche echiche banyere ihe ngwọta ọdịnala nke oyi oyi? Chọta nkà na ụzụ ọhụrụ anyị iji nweta gị! Dị iche site na mmepe oku, anyị na-emepe ugbu a ụdị ihe ngwọta ọkpụkpụ, ihe nkiri ikpo ọkụ infrared. Ihe ntaneti nke a na-emepụta maka ihe ọkụkụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe nkiri ikpo ọkụ nke infrared...
Sistem Kpo Oku Sistem kpo oku Systerm na-ekpo ọkụ Sistem Na-ebu Ọkụ Sistem na-ekpo ọkụ Snowway Sistem Na-ekpochasị Mmiri nke Snow Nkume Na-ekpo Ekpu Terrarium kpoo akwa